कस्तो विशेषता भएका मान्छे हुन्छन् भाग्यमानी ? – Nepal Trending
कस्तो विशेषता भएका मान्छे हुन्छन् भाग्यमानी ?
On ४ असार २०७६, बुधबार १३:५५
काठमाडौं : हरेक मानिसको शरीरिक बनावट फरक हुन्छ । फरक–फरक बनावट र संकेतले व्यक्तिको विशेषताबारे पनि बताइरहेको हुन्छ । विशेष गरी समुद्रशास्त्रले यस्ता कुराको विशेषता बताइरहेको हुन्छ । शास्त्रका अनुसार शरीरमा भएका यी संकेतहरुले तपाईको बारेमा निम्न कुराहरु बताउँछन् ।
दाँतमाथि दाँत खप्टिनुः
दाँतको बीच खाली ठाउँः
पुरुषको छातीमा रौँः
भाइटीका किन लगाइन्छ ? कारण र रहस्य यस्तो छ ( सबै नेपालीले हेर्नै पर्ने )
यसरी गर्नुस लक्ष्मी पुजा त्यपछि तपाईंको घरमा सधै लक्ष्मीको बास हुनेछ
लक्ष्मी पूजाका दिन भुलेर पनि नगर्नुस् यस्ता काम ! अन्यथा लक्ष्मी ढोकाबाटै फर्किन्छिन्
थाहा पाइराख्नुस् ! ग’र्भमा जु’म्ल्याहा बच्चा भए देखिन्छन् यस्ता ७ सं’केतहरु !
अनुहारमा सधै चमकता ल्याउन के गर्ने ? जानीराखौ
मेकअप लगाएर किन सुत्न हुँदैन ? कारण यस्ताे…
टि -१० लिगमा सन्दिपको जलवा कायमै ! एकै ओभरमा झारे...
लज्जाष्पद हारसँगै नेपाल इमर्जिङ टिम्स एसिया कपबाट बाहिरियो
सन्दिप पुन: दिल्लीमै
इमर्जिङ टिम्स एसिया कप : भोलि नेपाल र भारत भिड्ने
आज सोमबार सच्चा मनले भगवान शिवको दर्शन गर्दै राशिफल पढ्नुहोस
एमसीसीविरुद्ध नेपाल १ सय १३ रनले पराजित
नेपाली महिला टोली क्रिकेट खेल्न नेपाली टोली चीनतर्फ